Horudhaca kulanka Premier League ee Kooxaha Arsenal iyo Watford… (Gunners oo u baahan inay ka fogaato in rigoore laga dhaliyo) – Gool FM
(London) 22 Sebt 2019. Arsenal ayaa doonaya inay ka soo kabsato barbarihii 2-2 ee ay la galeen Watford kulankoodii ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League marka ay maanta soo dhoweynayaan Naadiga Aston Villa.
Kooxda Aston Villa ayaa dhankeeda rabta inay wadada guusha dib ugu soo laabato kaddib markii ay adkaan weysay labadeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo marna laga adkaaday marka ay barbaro gashay.
Sead Kolasinac ayaa la bedelay kulankii Jimcihii ee Europa League oo ay guusha gaareen, maadaama uu dhaawac yar qabay, laakiin Arsenal ayaa ku rajo weyn inuu taam noqon doono kulanka maanta.
Rob Holding ayaa laga yaabaa inuu tartamo, iyadoo xiddigaha ka soo baxay akadeemiga kooxda ee Joe Willock iyo Bukayo Saka ay rajeynayaan inay kasoo muuqdaan kulankan, kaddib markii ay labadoodaba goolal ka dhaliyeen Eintracht Frankfurt.
Dhinaca kale xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Aston Villa ee Trezeguet ayaa dib u soo laabanaya kaddib markii uu la maqnaa hal kulan oo ganaax ah, halka Matt Targett uu ka soo kabsaday dhaawac dhanka muruqa ah.
Jonathan Kodjia iyo James Chester ayaana weli dhaawac ah oo kasii maqnaan doona kooxda Aston Villa.
>- Arsenal ayaa guuleysatay lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Aston Villa tartammada oo dhan, iyadoo shabaqeeda gool ka ilaashatay mid kasta oo ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeeyey.
>- Kaliya Manchester United iyo Chelsea oo afar guul oo Premier League iyagoo marti ah Arsenal guul kaga soo gaaray Emirates ayaa ka badan marka loo eego Aston Villa oo 3 ku soo gaartay, iyadoo Villans kooxda lagu naanayso ay saddexdaas kulan ku soo adkaatay garoonkan sanadihii 2008, 2011 iyo 2013.
>- Aston Villa ayaa loo diiwaan geliyey 1 guul, 1 barbaro iyo 3 guuldarro shantii kulan ee furitaanka horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waana rikoorkii saxda ahaa ee ay haysteen marxaladaan oo kale horyaalka xilli ciyaareedkii 2015-16, markaasoo ay ku dhameysteen kaalinta ugu hooseysa horyaalka.
>- Tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkii hore ciyaaryahannada Arsenal ayaa sameeyey qaladaad kooxdooda goolal looga dhaliyey, waxaana qalad ay sameeyeen looga dhaliyey 14 gool, waana in ka badan koox kasta oo kale horyaalka Premier League.
>- Gunners ayaa sidoo kale laga dhaliyay 10 gool oo rigoore ah tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana rikoorkaas ku wehlisa kooxda Brighton.
>- Haddii Arsenal laga dhigo rigoore kulankan ay la leeyihiin Aston Villa waxay noqon doonaan kooxdii afaraad ee taariikhda Premier League ee rigoorayaal laga afar kulan oo isku xigta waxaana ay wehlinayaan Stoke oo afar rigoore laga dhaliyey Janaayo 2014, Wimbledon (5) August 1999 iyo Norwich (5) September 2011.
>- Arsenal ayaa u ogolaatay kooxaha ka soo horjeedaa 96 shuut (darbo) xilli ciyaareedkan illaa iyo haatan Premier League waana in ka badan koox kasta oo kale xilli ciyaareedkan 2019-20 illaa iyo haatan.